PressReader - Kwayedza: 2018-10-05 - Murume tasa ku’small-house’
Murume tasa ku’small-house’
Kwayedza - 2018-10-05 - Nhau Dzemuno - Kingstone Mapupu
MURUME wekuGweru - uyo anga ari mutyairi wemabhazi anoenda kunze kwenyika - ari kunzi akafa nemusi weChipiri svondo rino apo aiva pakati pekusasana neshamwarikadzi yake kumba kwayo mumusha weStoneridge, muHarare.
Mamwe mashoko anoti murume uyu paakafa, ainge ari pakati pekushereketa neshamwarikadzi yake.
Michael Sibongile Machacha (52), uyo anga achishanda kumabhazi eInter Africa, anonzi akafira pamba paNomatter Mutanhura kana kuti Mai Shyline.
Mutauriri wemapurisa mudunhu reHarare, Assistant Inspector Webster Dzvova, vanotsinhira nyaya iyi.
“Hongu, tine nyaya yemurume anga achishanda kukambani yeInter Africa semutyairi webhazi uyo anonzi akanofira kumba kwemukadzi waaidanana naye. Murume uyu ndewe kuGweru, shamwarikadzi iri yekuStoneridge,” vanodaro.
Vanoti Machacha anonzi akaridzira Mutanhura nhare nemusi weMuvhuro uno achiti aida kuzonomuona apo aiti aisanzwa zvakanaka uye akanga asiya bhazi rake kugaraji apo akabva naro kuZvishavane.
“Machacha anonzi akasvika kumba uku ndokusvikobikirwa svutugadzike akainwa ndokubva vanorara. Nguva dzekuma2 kunze kwave kuedza, murume uyu anonzi akatanga kuti aitadza kufema zvakanaka nekuda kwedenda reAsthma iro anonzi aiva anaro.
“Anonzi akazobuda panze apo akasvikopunzika achibva afa ipapo. Vamwe vanhu vanonzi vakaedza kumubatsira asi vakazoona kuti ainge afa,” vanodaro Asst Insp Dzvova.
Vanokurudzira vanhu kupota vachienda kuzvipatara kana vaine zvirwere zvinozivikanwa.
Mutumbi waMachacha unonzi wakazoendeswa kuchipatara cheHarare Central Hospital uko wainge wakamirira kuongororwa namachiremba.
Mutanhura paakashanyirwa neKwayedza nemusi weChitatu chino, akaramba kutaura nevatori venhau achiti achiri kuchema.
“Ndiri kuchema ini, handidi zvekutaura nemi. Ibvai pano, ndinogona kukudirai mvura.
“Pane mashoko aitaurwa nevamwe venyu (vatori venhau) ekunyepa, zvimwe zvose handidi kutaura endai munonyora zvamunoda,” anodaro.
Mukadzi uyu akawanikwa achiwacha magumbeze anonzi ndiwo akafira Machacha apo aiva pamubhedha wake.
Mamwe mashoko ari kutaurwa nevamwe anoti murume uyu akafa nekuda kwechirwere cheshuga kana BP.
“Isu tinogara muno, tanzwa kuti vaviri ava vanga vachishereketa apo murume uyu azongotanga kuti ava kupiswa, vose vasina kupfeka. Azodonha pamubhedha ndokuzoburitswa panze kuti awane mhepo ndokufira ipapo,” anodaro mumwe mudzimai uyo asina kuda kudurwa zita rake.
Mupurisa aive panhamo
Vanhu panhamo yaMichael Sibongile Machacha.